Umlando abakwaShembe benyukela entabeni ndawonye
AMAKHOLWA ohlangothini lwaseThembezinhle ezilungiselela ukuqwala intaba iNhlangakazi, emkhulekweni webandla lamaNazaretha yaminyaka yonke Isithombe: BONGANI MBATHA/ANA
Khulekani Maseko | January 11, 2022
KUQOPHEKE umlando izinhlangothi ezimbili zebandla lamaNazaretha, zikhuphukela entabeni iNhlangakazi ndawonye izolo, ukuyokwenza umkhuleko waminyaka yonke.
Phambilini, kube nokuvungama phakathi kwamalungu asohlangothini lwaseThembezinhle njengoba bekuvela ukuthi amanye awayizwa eyokunyukela entabeni nohlangothi lwaseGinyezinye okuvele ukuthi kube yisivumelwano sabaholi balezi zinhlangothi, inkosi Phinda “Ukukhanyakwelanga” Shembe waseThembezinhle nenkosi uSizwe “Umudliwamafa” Shembe waseGinyezinye.
Okhulumela abaseGinyezinye uMfundisi Joseph Mhlongo, uthe ukukhuphukela entabeni eyodwa ngosuku olufanayo kwezinhlangothi ezehlukene, kungokokuqala emlandweni kusuka ibandla lamaNazaretha lahlukana.
“Bekungakaze kwenzeke. Engingakusho ukuthi amakhosi azokhophuka womabili, ngokujwayelekile akhuphuka ngezimoto bese amakholwa elandela,” kusho uMhlongo ebeka ngamafuphi.
Ukukhuphukela kule ntaba ngosuku olufanayo kwalezi zinhlangothi, kuqinisekiswe nawokhulumela uhlangothi lwaseThembezinhle, uMnuz Nkululeko Mthethwa, emqhafazweni wakhe awuthumelele intatheli emva kokuthi ucingo lwakhe lukhala lungabanjwa.
“Ngingakuqinisekisa ukuthi sizokhuphukela entabeni ndawonye kusuka namhlanje (esho izolo). Sivumelene ngalokho,” kusho uMthethwa.
Ngesikhathi Isolezwe lifika eNanda, amakholwa ohlangathini lwaseThembezinhle abeseqalile ethathwa yizimoto okuvele ukuthi azokwehliswa ndawana thize lapho abezobuthelana khona ngaphambi kokuqala lolu hambo.
Zombili lezi zinhlangothi azivezanga ukuthi phakathi kwabaholi, owaseThembezinhle nowaseGinyezinye, yimuphi ozohola amakholwa njengosiko lwamaNazaretha, kepha kuvele ukuthi bazobe behambisana.
Zinyukela entabeni nje lezi zinhlangothi, bekulindeleke ukuthi olwaseKuphakameni lwehle izolo, njengoba kuthiwa belinyuke entabeni efanayo ngesonto eledlule.
Uhlangothi lwaseBuhleni, olukhulekela entabeni yaseKhenana, lona lusakuyo intaba njengoba ngokokhulumela lolu hlangothi, uMnuz Thokozani Mncwabe, ethe abakazi ukuthi bazokwehla nini njengoba belinde izwi eliphuma kumholi wabo uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe elizobayalela ukuthi behle.